कांग्रेसभित्रको महाभारत, जित हार कसको ! | रुपान्तरण
नेपालमा कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप र औषधि प्रयोग गर्न बाटो खुल्यो
मन्त्रिपरिषद बैठकबाट १९ ओटा निर्णय
कांग्रेसभित्रको महाभारत, जित हार कसको !
२४ पुष २०७६, बिहीबार १७:४४
काठमाडौं । गिरीजाप्रसाद कोइराला पुत्री सुजता कोइरालाको भाषणले एकाएक चर्चा पायो । पछिल्लो समय कांग्रेस राजनीतिमा धमिलो बन्दै गएको उनको बोलीले एकाएक संगठनभित्र मात्र होइन बाहिर पनि खलवल मच्चियो ।
उनले एउटा कार्यक्रममा सम्बोधनको क्रममा तितो यर्थाथ प्रस्तुत गरिन । उनले भनेकी थिइन-‘देउवाले कांग्रेसलाई यस्तो ठाउँमा पुर्‍याए कि कांग्रेसलाई भोटदिन मेरा हात रोकिनेछन ।’ उप-प्रधानमन्त्री भइसकेकी उनको यो अभिव्यक्तिले कांग्रेसको भविष्यमा गम्भिर प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ । भलै अहिले सक्रिय राजनीतिमा उनको उपस्थिती कम छ ।
१३ औं महाधिवेसनमा पौडेल पक्षबाट महामन्त्री निर्वाचित भएपनि डा. शशांक कोइरालाले सभापति देउवाको नेतृत्व शैलीलाई प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष सहयोग गरिरहेका थिए । तर, देउवा कार्यकाल सकिन केही समय बाकी रहँदा उनी देउवाबाट टाढीन थालेका छन् ।
एक अनलाइन ( बाह्रखरी डट कम) लाई दिएको अन्तर्वातामा उनले १३ औं महाधिवेसनमै देउवाले १४ औं महाधिवेसनमा आफूलाई सहयोग गर्ने बाचा गरेको बताएका छन् । तर, परिस्थिती आफूअनुकुल नहुँने बुझेपछि उनी टाढीएका छन् । अन्तर्वातामा उनले पार्टीलाई देउवामुक्त गराउनुको विकल्प नरहेको दाबी गरेका छन् ।
विधानसम्मत देउवा कार्यकाल सकिन करिव २ महिनाको समय बाँकी रहँदा उनलाई एक्लो बनाउने खेल बढेको छ । महामन्त्री कोइरालाले देउवाइतर समूह मिलेर पार्टी सभापतिको तदर्थवादबाट मुक्त गराउने अभियान प्रारम्भ भएको उद्घोष गरिसकेका छन् ।
१३ औं महाधिवेसनमा देउवालाई साथ दिन निर्णायक भुमिका खेलेका तथा पार्टीमा तेस्रो ध्रुवको रुपमा उदाएका पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पनि उनी विरुद्ध देखिएका छन् । गत पुस १५ गते ४ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बोकेर देउवा निकट बुढानिलकण्ठ पुगेर उनले सो कुरा प्रमाणित गरेका छन् ।
रुपान्तरणसँगको कुराकानीमा कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य तथा रामचन्द्र पौडेल समूहका एक नेताले भने,‘कांग्रेस पार्टी बचाउने हो भने देउवाको विकल्प खोज्नै पर्छ।’ केन्द्रिय कमिटिको बैठक वहिस्कार त्यसैको संकेत हो त भन्ने प्रतिप्रश्नमा उनले भने,‘आगामी महाधिवेसनबाट देउवा नेतृत्वमा आउने हो भने कांग्रेस संगठन इतिहासको पानामा सिमित हुन्छ ।’
२६ गतेबाट शुरु भएको पार्टी केन्द्रिय कार्यसमितिको बैठक विवाद र वहिस्कारको चपेटामा पर्‍यो । संस्थापन इतर पौडेल तथा सिटौला समूहले त्यसलाई वहिस्कार गर्‍यो । उनीहरुको माग पार्टी महाधिवेसनको क्यालेण्डर तथा भातृ संगठनमा भागवण्डा केन्द्रित थियो । संस्थापन र इतर समूहले वार्ता गर्न समिति बनाए ।
देउवा पक्षबाट पार्टी उपसभापति विमलेन्द्र निधी तथा इतर पक्षबाट पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले वर्ताको नेतृत्व गरे । पटक पटक वार्ता गरेर सहमतीको नजिक पुगे पनि सहमती तोड्ने काम देउवाले गरेको इतर टोलीबाट वार्ताको प्रतिनिधित्व गरेका हृदयराम थानीको दाबी छ ।
‘हामी हदै लचिलो भएर, गिभ एण्ड टेकको विवाद मिलाउदा उहाँहरुले हुन्छ भन्नुभयो’, उनले भने–‘तर, पुस ११ गते बैठक बसेर जुन निर्णय वहुमतको आधारमा गर्नुभयो यो सरासर बैठकको सहमती विपरित छ ।’
तर, विवादको शुरुवात यति मात्र होइन । २०७४ सालमा सम्पन्न भएको तीन तहको निर्वाच र त्यसले दिएको निराश परिणामले कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति भताभुङ्ग भएको हो । तीन तहको निर्वाचनमा कांग्रेस तत्कालीन वाम गठबन्धन तथा हालको नेकपासँग अकल्पनिय ढंगले पराजीत भएसँगै पार्टीभित्र विवादको झिल्को देखिएको हो ।
नतिजा आएसँगै सभापति देउवाको तिव्र विरोध भएको थियो । कांग्रेस गढ चितवनमा स्थानीय तह निर्वाचनमा तत्कालीन माओवादी पार्टीसँग मिलेर रेणु दाहाललाई महानगरपालिका प्रमुख जिताएसँगै उनको आलोचना बढेको थियो । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा यो क्षेत्र प्रचण्डलाई उनले सुम्पिएसँगै उनको आलोचना व्यापक भएको थियो ।
उनलाई चुनाव जिताउन संगठनात्मक रणनीति बनाउन नसकेको, अन्य पार्टीसँगको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको लगायतको आरोप लाग्यो । पार्टी भित्र र बाहिर नैतिकताको आधारमा राजीनामा माग भन्यो । विकल्पको रुपमा विशेष महाधिवेसन बोलाउने प्रस्ताव गरियो । तर, उनले राजीनामा त परकै विषय हारको नैतिक जिम्वेवारी लिन पनि मानेन् । संसदीय दलको नेता भए पनि संसदको कमाण्डीङ्ग फितलो भएकाले प्रतिपक्षि दलको भुमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप उनलाई छ ।
उनको ध्येय आफ्नो गुटलाई बलियो बनाएर १४ औं महाधिवेसन आफ्नो पक्षमा पार्ने योजनाबाहेक अरु नभएको आरोप इतर समूहहरुले लगाइरहेको छ । पौडेल निकट केन्द्रिय सदस्य थामी भन्छन्–‘त्यतीवेला विपक्षि विरुद्ध कही न कही खेल्ने ठाउँ भेटिन्छ भनेर हामी पर्खिरह्यौ, तर नतिजा सोचेअनुरुप आएन’।
त्यहीँ झिल्कोको रुपले कांग्रेसमा अहिले डडेलो लागेको हो । गत पुस ११ गते पार्टी बैठक सानेपामा बसाएर देउवाले वहुमतको आधारमा गरेको निर्णयले इतर पक्ष मोर्चावद्ध रुपमा त्यस विरुद्ध लागेको हो । आफू बाहेकको पक्षले वहिस्कार गरेको बैठकमा उनले गराएको ९ बुँदे सहमतीले समस्या विकराल बनाएको हो ।
‘१४ औं महाधिवेसन नसकिएसम्म हाम्रो नेता उहाँनै हो भनेर हामीले पटक पटक भनेका छौं’, केन्द्रिय सदस्य तथा सिटौंला पक्षधर नेता प्रदिप पौडेल भन्छन्–‘विधान मिचेर, विना सहमती र सरसल्लाहा विधान मिच्ने अधिकार कसैलाई छैन, चाहे त्यो सभापति नै किन नहोस् ।’
उक्त बैठकले ९ वुँदे निर्णय गर्‍यो । महाधिवेसन मिती तोक्ने , विभाग गठन गर्ने, सदस्यता वितरण सम्बन्धीको व्यवस्था निलम्वन गर्ने, तरुण दलको म्याद थप्ने, केन्द्र देखि स्थानीय तहसम्म पार्टी संरचनाको म्याद एक वर्ष थप गर्ने लगायत रहेका छन् । महाधिवेसनको मिती तोक्नुपर्ने माग गरेको इतर पक्ष भने असन्तुष्ट बनेको छ । पौडेल पक्षधर आफूसँग छलफल नगरि महाधिवेसनको मिती तोकेकोमा आक्रोशित भएको छ ।
विधान मिचेर आफूखुसी तदर्थवादमा पार्टी सञ्चालन गर्न खोजेको भन्दै सिटौंला पक्ष आक्रोशित भएको छ । केन्द्रिय सदस्य प्रदिप पौडेल विधानसंवत २८ विभाग बनाउन स्वभाविक भए पनि ४७ विभाग पुर्‍याउदा विधानको खिल्ली उडेको तर्क गर्र्छन् । विधानको धारा निलम्वन गर्ने अधिकार पार्टी सभापतिलाई नभएको भन्दै उनी केन्द्रिय कार्यसमितिको संख्या ८५ बाट बढाएर १ सय ७१ पुर्‍याउनु सभापतिको एक्लो अधिकार नभएको बताउँछन् ।
‘विधान परिवर्तन गर्नुपरे महासमिति बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ, जुन् अहिले संभव छैन’,उनी थप्छन्–‘केन्द्रिय कार्यसमितिलाई धारा निलम्वन गर्ने अधिकार छदैं छन्, निलम्वन गरिएको धारा १४ औं महाधिवेसनलाई प्रभावित गर्ने धाराहरु हुन् ।’
निरन्तर बैठक वहिस्कार देउवालाई ‘काउन्टर मुभ’को रुपमा इतर समूहले लिएको छ । देउवाले रोक्न खोजेको इतर समूहको सभापति भेलाहरुलाई ‘स्ट्राटेजिक प्लानिङ’को रुपमा इतर समूहले लिएको छ । ‘विधान मिचेर अन्य समूहलाई वाहेस गर्ने सभापतिलाई काउन्टर दिने भेलाको उद्देश्य हो’ सभापति भेलामा उपस्थित भएका एक सहभागिले रुपान्तरणसँगको कुराकानीमा भने ।
त्यसो त देउवा पक्ष भने ११ गतेको निर्णय अवैधानीक मान्न तयार छैन । समस्या समाधानका लागि बैठकमा रहेका देउवा पक्षधर केन्द्रिय सदस्य एन.पी साउद विधानमा दिएको सभापति अधिकारलाई प्रयोग गर्दा आपत्ति जनाउन नहुँने तर्क गर्छन् । संस्थापन पक्षधरले सबैको मागलाई सम्बोधन गरेर महाधिवेसन क्यालेण्डर नै सार्वजनिक गरेको साउदको तर्क छ । ‘असहमती उहाँहरुको छ , हामीले केन्द्रिय समितिको बैठकमा आएर कुरा गरौं सबैलाई चित्तबुझ्दो निर्णय गर्न हामी तयार छौं भनेकै छौं’, निधि भन्छन्–‘उहाँहरु बैठकमा आउनु हुन्न, सबै सहमती मात्र बैठक गरौं भन्नुहुन्छ त्यो संभव हामी देखदैनौं ।’
विवाद मिलाएर अघि बढ्न उपसभापति विमलेन्द्र निधि लागि परेका छन् । तरुणदलको म्याद थप्ने र पार्टीको एक वर्ष म्याद थप्ने विषयमा विवाद नरहे पनि सदस्यता वितरण र महाधिवेसनको कार्यतालिकामा भने समस्या देखिएको छ । तर, नेविसंघको भागवण्डा र तरुण दलको भागवण्डाले उग्र रुप लिएको छ ।
पौडेल पक्षधरले दुई मध्ये एक भातृ संस्थामा आफ्नो नेतृत्व खोजेको छ । देउवा ६०, ४० को भागवण्डामा लागेका छन् । ‘यो विषय पनि मिलिसकेको थियो, तर आधाघण्टामा बैठक बोलाएर सहमति उहाँले भाड्नुभयो’, थानी भन्छन् । उनैलाई काउण्टर दिन विपी पुत्र शशांक कोइरालाको घरमा ११ गतेको बैठक डाकिएको हो ।
त्यसपश्चात् बसेका बैठकहरु पनि इतर समूहले बहिस्कार गरिरहेको छ । सभापति भेलालाई वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, पूर्व महामन्त्रीहरु प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला नेताहरु रामशरण महत, शेखर कोइराला, बलबहादुर केसी, डा. मिनेन्द्र रिजाल, गगन थापा, प्रदिप पौडेल, डा. चन्द्र भण्डारी, गूरु घिमिरे लगायतले नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
पार्टीमा झुक्काएर एकलौटीपनले पार्टीले पार नपाउने भन्दै पौडेल उक्त भेलामा कडकिएका छन् । ‘रामचन्द्र दाइको ४० प्रतिशतको माग पुरा गर्ने प्रतिवद्धता गरेकै छौं , १३ औं महाधिवेसनमा सहयोग गर्नुभएको सिटौला जिलाई पनि उचित स्थान दिन सभापति तयार हुनुहुन्छ’, साउद भन्छन्–‘घरभित्रको कुरा घरमै मिलाएको राम्रो, बैठकमा सहभागि नभएर जग हसाउँनु उपयुक्त हुँदैन ।’